Vaovao - Torolàlana feno ho an'ireo mpamaky ahidratsy tsara indrindra rehetra hividy amin'ny 2021.
Torolàlana feno ho an'ireo mpamaky ahidratsy tsara indrindra rehetra hividy amin'ny 2021.
Tsy maninona na manao vape ianao, manakodia ny tonon-taolana na maka ravin-bongo; raha ny ahi-dratsy amin'ny fifohana sigara dia misy foana ny zavatra tsy maintsy ananana: grinder mety. Ireto ny safidinay ho an'ny makarakara tsara indrindra eny an-tsena ankehitriny.
Tsy maninona raha toa ianao ka newbie rongony na mpankafy za-draharaha rehefa miresaka ahi-dratsy, misy zavatra tena ilaina amin'ny fotoam-pahombiazana iray: ahitra voatoto tsara. Na inona na inona ianao raha mpifoka sigara na mpampiasa vape, ny zavatra iray izay tsy maintsy ananana anao foana dia ny grinder anao. Tsotra ny antony; mila tsimparifary voatoto tsara ianao ka afaka mirehitra tsara. Fa maninona Satria ny velarantany misimisy kokoa dia midika hoe avo kokoa.
Ny olona sasany mampiasa hety, ny rantsan-tananao koa afaka manao ny fikafika, fa tsy misy fomba ampitahaina amin'ny grinder azo antoka taloha. Izy ireo dia misy endrika sy habe rehetra, ahitanao azy ireo amin'ny fitaovana azonao eritreretina, ary miaraka amin'ireo fanavaozana vao haingana, dia hahita zavatra manaitra ianao amin'ny famolavolana sy ny fiasa. Ny fanavaozana sy ny teknolojia dia manatsara hatrany ny fizotran'ny fikolokoloana, ary raha mivoatra ny fitotoana dia mivoatra koa ny fifohana sigara.
Zahao ity safidin'ireo mpanao grindy tsara indrindra eny an-tsena ity izao ary jereo hoe inona no mampiavaka ny grinder amin'ny ambiny.
Fa maninona no mila mpitrandraka ahidratsy?
Mampiasà nify maranitra sy herin'ny tanana kely, na ny fanindriana bokotra raha miasa miaraka amin'ny iray amin'ireo karazana herinaratra mpanafika ianao, dia manaisotra ny ahitrao ny mpitrana ahidratsy ka tsy mila miantra ny rantsan-tànanao na mahafoy ilay hany mpivady hety ao an-trano. Vokatr'izany dia mahazo zana-tany azo setroka tanteraka ianao nefa tsy misy hatsembohana.
Rehefa miasa tsy misy makana ianao dia tsy azonao atao tsara araka izay azo atao ny mandoro anao, indrindra raha io miraikitra io. Raha tsy lazaina intsony, tsy afaka mahazo kief ianao, ireo trichome mamirapiratra mamirapiratra manerana ny kibonao ary mahery vaika. Tsy mora, farafaharatsiny.
Azonao atao ny mandany minitra vitsivitsy, na ratsy kokoa, amin'ny fakana ny tsimponao. Na, afaka mampiasa grinder ianao ary manapotika ny fitehirizanao afaka segondra ary mahazo kief, izay azonao hafafina amin'ny voninkazo mba hanatsarana azy. Miresaka momba ny ranomandry amin'ny mofomamy.
Ny mpitroka dia miantoka ihany koa ny fandoroana. Raha manangona lovia kely amin'ny tsimok'aretina ianao, dia tsy afaka feno fonosana lovia, ary very maina fotsiny ianao satria tsy afaka manafana azy tsara. Ankoatr'izay, sarotra kokoa ny manaitra, ary matetika kokoa noho ny tsy misy, mbola misy sisa maitso tavela, izay tsy ho tsapanao raha tsy mandroaka ny “lavenona” ianao.
Ny mpifoka sigara sy mitoka-monina dia hahazo tombony amin'ny fikosoham-bary ihany koa. Ny tsimparifary izay nolalovan'ny fikosoham-bary (nefa tsy dia tsara loatra) dia azo zahana amin'ny taratasy ary hahatonga ny fizotran'ny rivotra ho maivana. Ary mifoka tsara kokoa koa izy ireo.
Karazana mpitrandraka ahidratsy
Misy karazany roa lehibe ny fikosoham-bary: ny mpitoto-tanana sy ny mpitoto herinaratra. Miaraka amin'ny grinders manual, mila ezaka bebe kokoa ianao. Mila mihodina ianao ary mihodina mampiasa ny tananao mba hahavitana ilay asa.
Mikasika ny vidin'ny milina fanaovana manual kosa dia miovaova ny vidiny fa ny ankamaroan'ny olona dia heverina ho takatry ny fiarahamonina ahidratsy. Miankina amin'ny karazany izany, satria maro karazana ny makarakara tanana:
2-Piece Grinder Griff: efitrano iray ho an'ny fikosoham-bary sy fitehirizana.
3-Piece Grinder Griff: efitrano roa, iray ho an'ny fikosoham-bary ary iray ho fitehirizana.
4-Piece Grinder Grinder: efitrano telo, iray ho an'ny fikosoham-bary, iray ho fitehirizana, ary iray ho an'ny kief feno efijery.
Na dia tsy malaza aza izy ireo, dia misy ihany koa ny grind manual 5-piece. Ity karazana ity dia mazàna misy efitrano efatra: fitotoana, fitehirizana ary roa ho an'ny kief. Ny fananana mpihaza kief roa dia afaka manampy anao hisambotra vovo-voninkazo matanjaka kokoa satria manana efijery fanampiny hamandrihana ireo zavamaniry kely be loatra.
Ny mpitrandraka karatra dia karazana grinder manual iray izay tsy manana efitranony ary mahia sy mora entina. Ny mpitrongatra karatra dia tsy hikosoka ary koa ny mpitety tanana hafa, ary tsy hisambotra kief, fa mora vidy izy ireo ary afaka manodina mora foana rehefa mandeha.
Ankoatry ny fanamboarana amina faritra maro samihafa, ny mpangarom-boalavo dia vita amin'ny fitaovana samihafa, izay samy manana ny mahatsara sy maharatsy azy avy:
Plastika: mora vidy, maivana, manome fikosoham-bary OK, tsy maharitra ary mety ho tapaka ihany.
Hazo: tsy manam-paharoa, biolojika, mety hamokatra fiharatra vy rehefa ampiasaina ary mila ezaka bebe kokoa amin'ny fikosoham-bary.
Aluminium: ny metaly mora indrindra, maharitra ela kokoa noho ny plastika, milanja mihoatra ny plastika, mora ampiasaina ary manome grind tsara.
Titanium: avo lenta indrindra, tsy milanja aluminium firy, lafo vidy indrindra, namboarina haharitra ary ho an'ny mpampiasa.
Farany, manana milina elektrika ianao. Ireo mpangarohary herinaratra dia manao ny asa rehetra ho anao, ary ny sasany handroaka ny ahi-dratsy aza, izay mahatonga azy ireo ho mora ampiasaina. Matetika izy ireo dia eo amin'ny lafiny pricier ary tsy hitahiry kief, fa raha olona voan'ny aretin-tratra ianao na marary tanana, dia esorin'ny fikosoham-bary herinaratra ny fikorontanan'ny fikotrana.
Marika mpitrandraka ahitra tsara indrindra
Raha nieritreritra ianao fa be dia be ny safidin'ny vera sy ny etona, dia mbola tsy nanandrana niantsena ho an'ny makarakara ahi-dratsy tsara indrindra ianao. Misy an'arivony maro, ary misy izy ireo na aiza na aiza, manomboka amin'ny headshops ka hatrany Amazon. Mety hiharan-doza ihany koa ianao rehefa miantsena grinder satria tsy fantatrao na handeha hiasa izy ireo mandra-pividy azy ireo. Misy zavatra vitsivitsy ratsy kokoa noho ny mandany vola amin'ny fitaovana iray izay manao asa malemy.
Ny fisafidianana ny marika mety dia ny zava-drehetra rehefa mitady ny mpitroka ahidratsy tsara indrindra ianao. Raha manana marika ratsy ny marika, dia azonao atao ny manantena hahazo vokatra ratsy sy tsy misy ilana azy. Rehefa mitady ny marika tsara indrindra amin'ny fikosoham-bary, dia alao antoka fa hahatratra ireo manana famerenana sy fijoroana vavolombelona mivaingana.